Rofomex dia namindra i Mexico nankany amin'ny Phosphate fahaleovan-tena: -Ellicott Dredges
Rofomex Mamindra any Mexico ho any amin'ny fahaleovan-tena mitongilana Phosphate
Oktobra 1, 2011
Source: Gazety injeniera sy fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Roca Fosforica Mexicana SA de CV (Rofomex) nanomboka ny toeram-pitrandrahana fosfatsa iray tany Baha California Sur any 1981 ary iray hafa ao amin'ny 1982. Ny famokarana mitambatra amin'ireo fiasa ireo dia antenaina hampiakatra an'i Meksika amin'ny toeran'ny saika hiankina amin'ny fanondrahana posy phosphate ao 1980 ho mahavita tena amin'ny 1985. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia nanafatra an'i 1.7 tapitrisa mt / yr amin'ny vatan'ny poso i Meksika, indrindra fa avy any Florida tany Etazonia sy Maroc. Ny governemanta Meksika dia nametraka ny laharam-pahamehana ho an'ny toeram-pitrandrahana Rofomex ho ampahany amin'ny fandaharan'asa hanatsarana ny vokatra amin'ny toeram-piompiana meksikanina.
Ny voalohany amin'ireo toeram-pitrandrahana Rofomex vaovao dia ao San Juan de la Costa any amin'ny Helodranon'i Kalifornia. Izy io dia namokatra ny fifantohany voalohany tamin'ny Janoary 1980, ary ny entana betsaka voalohany dia nandao ny tokotanin'i Rofomex nankany Lazaro Cardenas any amin'ny morontsirak'i Pasifika Mexico tamin'ny volana aprily. Ny fandefasana ny fandefasana dia kasaina hatao isaky ny 12 andro.
Avy amin'i Lazaro Cardenas, ireo vakan'ny fosfat dia haterin'ny lamasinina mankany amin'ny zavamaniry Fertimex any San Luis Potosi, Queretaro, ary Guadalajara. Taty aoriana, ny fandefasana sasantsasany dia hivezivezy ao amin'ny lakandranon'i Panama sy ny Hoalan'i Mexico any amin'ny kompleks Fertimex ao amin'ny seranan'i Pajaritos.
Amin'ny fahafaha-manao azy, ny fitrandrahana San Juan de la Costa dia hamokatra 730,000 mt / yr ny naoty naoty manodidina ny 31% P2O5 amin'ny asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny tany ambanin'ny tany izay hitrandraka ores naoty 18% P2O5. Ny famokarana isam-bolana an'ny concentrates dia nahatratra 1,200 mt tamin'ny volana Janoary, 12,800 mt tamin'ny volana febr, 12,000 mt tamin'ny volana martsa, ary 20,000 mt tamin'ny volana aprily. Ny famokarana dia nokasaina hananganana hatramin'ny 60,000 mt amin'ny volana Jolay ary hijanona eo amin'io ambaratonga io mandritra ny taona sisa.
Tao Santo Domingo, eo amoron'ny Pasifika ny saikinosy Baja California, Rofomex dia nanamboatra toeram-pitrandrahana izay hamokatra 1.5 tapitrisa mt / yr ny concentrate amin'ny alàlan'ny fitrandrahana fitrandrahana fasika amoron-dranomasina izay mitentina 4.5% P2O5 amin'ny isa cutout 3% P2O5. Ellicott roa fikapohana lohany suction moka mamolavola an-tsakafo amin'ny zava-maniry voalohany azo avy amin'ny gony, izay hitsingevana any amin'ny faritry ny vanja ao ambadiky ny dredge.
Rofomex dia nanomboka tao Santo Domingo tamin'ny tapaky ny taona 1982, ary ny taona 1984 dia namokatra ambim-bava phostatosa vetivety tao Mexico ny toeram-pitrandrahana vaovao roa tao Mexico, miaraka amin'ireo ambiny izay azo amidy. Tamin'ny taona 1985 dia namboarina hanana famokarana ny zavamaniry vaovao Fertimex, ny fitomboan'ny harinkarena sy ny isan'ny mponina dia hampiakatra ny filan'ny fosfat ao Mexico, ary hambara ny tsy fahampian'ny phosfat vaovao. Eo am-piandrasana izany fangatahana izany dia nanomana fanitarana 4.5 tapitrisa mt / yr amin'ny takelaka fanaovana sary i Rofomex.
Rehefa ela ny ela dia manana loharanon-karena phosphate betsaka i Meksika mba hivoaka ao amin'ny Baja California Sur, ankoatry ny vola roa napetraka. Ny geôlôma Rofomex dia nitantara ny fisian'ny posisialy hafa tany San Hilario, Santa Rita, Tembabiche, La Purisima, San Jose de Castro, ary San Roque. Amin'ireny, ny tahiry tao San Hilario no be mpitrandraka fatratra indrindra, miaraka amin'ny mari-pahaizana drill ny tonon-taolana be dia be mitoto ny 11-13% amin'ny vatam-paty milina sy 14-18% amin'ny vato tsy voangona ao ambanin'ny 30-80m amin'ny fihoaram-pefy. Any amin'ny faritr'i Santa Rita, ny fitrandrahana potiôma azo atao ara-toekarena dia mitranga ao anatin'ny fitrandrahana vao haingana fa tsy misy fihoaram-pefy intsony, fa ireo kosa dia mijanona ho voadinika kokoa.
Ny fisian'ireo fasika phosphate ao amin'ny faritr'i Bahia de Magdalena amin'ny morontsirak'i Pasifika dia efa fantatra hatramin'ny 1914, ary tamin'ny 1955 dia nanao fandinihana azo atao i Hanna Mining sy i Minera Fornos tao amin'io faritra io. Saingy, ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa sy ny fanaovana Mexico ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany no nahatonga an'i Hanna nisintona. Tamin'ny 1974, "Consejo de Recursos Minerals," masoivohon'ny governemanta, dia nijery indray ny faritra ary nanapa-kevitra ihany koa fa tsy azo tanterahina ara-toekarena ny fitrandrahana. Tamin'ny 1978, ny geolojian'ny governemanta dia nanao fandaharana fandavahana, taorian'ny fametrahana ireo sisin-dranomasina tamin'ny lavaka tao anatin'ny elanelam-potoana 2 km, ary hitan'izy ireo fa teo amin'ny halavirana mihoatra ny 70 km ny phosphate. Ny tena fetra dia tsy hita talohan'ny nifaranan'ny programa fandavahana. Fomento Minero dia nijery indray ilay vinavina, nanapa-kevitra fa misy dingana mahasoa ara-toekarena azovolavolaina ary hiroso amin'ny fivoaran'ny toeram-pitrandrahana.
Ny fetran'ny andrefan'ny Santo Domingo dia ny Ranomasimbe Pasifika, ary ny sakany amin'ny atsinanana dia manodidina ny 20 km. Raha ny marina dia mandainga, tsy misy firakotra na tsy misy fonony ary ny 19 m ny hateviny. Tsy ampy taona ny fanampiana, ary tsy dia avo loatra ny haavon'ny 15 m ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Ny vatany biolo dia efa ela izay, ary ny phosphate dia miseho toy ny fasika, boribory, fasika, ary matetika amin'ny ampahany kely amin'ny tahiry. Ny vitsy an'isa, ferromagnesium, rutile, ary sphene, ary koa ny mpitrandraka hafa. Ny mineraly voageja matetika dia tsy eo, afa-tsy ny akaiky azy. Salan'isa amin'ny 4.5% P2O5. Miovaova be ny loko fa mavo mavo ka ny volontany maizina. Ny loharanon-karena dia tombanana ho feno ny 1.1 miliara mt.
Ny fanadihadiana amin'ny antsipirihany dia natao ho an'ny faritra fitrandrahana roa, ny Elenas sy ny Prados, amin'ny fampiasana fitaovana fanodinana Longyear hanodinana azy. Ny faritry Elenas no faritra atsimo indrindra-an'ny roa ary mandrefy 6 km avaratra-atsimo atsinanan'i 3.5 km atsinanana-andrefana. Ny sisiny atsimo dia eo amin'ny ilany avaratry ny seranan-jono ao Lopez Mateos. Ny faritra Prados dia mifanohitra amin'ny fetra avaratra amin'ny faritr'i Elenas ary 9 km avaratra-atsimo. Ny fetran'ny andrefana dia bibikely iray noforonin'ny nosy sakana, Isla Magdalena.
Samy nitoraka tanaty tsipika 500 m ny zana-by roa, mampiasa riges nitaingina kamiao nametraka ny lavaka 4-in dia. Manodidina ny santionany 5,000 no nalaina tao amin'ireo lavaka ireo tao amin'ny elanelan'ny tsanganana 1.5-m. Ny halalin'ny lavaka farany dia 70 m ary ny halalin'ny lavaka dia 30-m. Ny fitsapana Ore dia nanaraka ny fomba fanao napetraka tao amin'ny indostria phosphate Florida.
Fitrandrahana Dual Dredge
Ny famakafakana ny rafitra momba ny harena ankibon'ny tany ho an'ny tetikasa Santo Domingo dia nahitana ny fiheverana ireo mpangady sigara, draglines, scraper, pala ary dredge. Ny fisafidianana rafitra mifototra amin'ny dredge dia miharihary indrindra fa ny rafitra hafa dia tsy afaka miasa tsara amin'ny haavon'ny ranomasina. Ny fandaniam-bola kely sy ny fikojakojana no nahatonga ny fisafidianana farany ny dredges sela mihintsan-tsolika mitsingevana miaraka amin'ny loha suction 27.
Ellicott roa® Ireo lisitry ny marika dia nampiasaina, ny tsirairay afaka mahavita manamboatra manodidina ny 2,000 mt / hr amin'ny slurried solid ho an'ny zavamaniry tombontsoa voalohany mitsingevana. Ny dredge tsirairay dia mifandray amin'ny zavamaniry amin'ny fantsom-pisy X, 600-m, 24-in dia pipa. Ny lohan'ny dredge dia misy fisondrotra ambany indrindra amin'ny 15 m. Ireo dredge roa ireo dia nitambatra mba hiasa tokana amin'ny fitrandrahana tokana mirefy 21 m ny sakany. Ny dredge iray miasa amin'ny fahaiza-manao dia afaka mihazona ny zavamaniry efa akaiky. Amin'ny fikarakarana mahazatra dia miara-miasa amin'ny sakany 70% ny fahafaha-manaingoany ny lanjan'ny roa tonta.
Ny fitrandrahana suction dia natao tamin'ny ambaratonga fahatapahana 3% P2O5 izay namokatra mari-pahaizana voajanahary 4.56% P2O5n'ny faritry ny fitrandrahana Prados ary 4.29% amin'ny faritra Elenas. Tsy ilaina ny fanesorana ny enta-mavesatra loatra; na izany aza, ny fako ao anaty ao amin'ny mineraly dia hampihena ny naotin-tsakafon'ny famokarana beneficiation ho 4.05% P2O5. Miaraka amin'ny CaO salan'isa 9.34%. Ny taham-pitrandrahana dia nomanina 16.5 tapitrisa mt / yr, miasa am-pandrosoana telo isan'andro, 330 andro isan-taona.
Ny tarehy mitrandraka dia 6 m ambonin'ny haavon'ny ranomasina ary 12 m ambanin'ny haavon'ny ranomasina. Ny fitrandrahana mifantina dia tsy azo atao matetika, fa ny faritra misy ny votoatin'ny CaO avo dia tsy azo atao raha azo atao. Ny «drill» santionany dia namboarina tamin'ny vata 100-m, ary ny lavaka tsirairay izay maneho ny 225,000 mt ny orana.
Ny dredges dia mandeha amin'ny herinaratra herinaratra 4,160v, 60 hertz. Teo am-pivarotana mitsingevana no nisy azy.
Mampifangaroana Sands Phosphate
Satria ny tsipika eo ambony sy ambanin'ny haavon'ny ranomasina dia samy manana ny mampiavaka azy, indrindra ny votoatin'ny CaO, i Rofomex dia namolavola fombafomba mifanaraka amin'ny ory rehetra. Ny rafitra dia namela ny fanariana taoty ho ao amin'ny faritry ny vanja isaky ny fotoana. Toy ny tao San Juan de la Costa, ny ranomasina dia nampiasaina nandritra ny fizotran'izany, ka ny vokatra dia nosasana amin'ny rano madio fotsiny mba hanafoanana ny klôro.
Ny tena fototry ny fizotrany dia nahitana famafazan-java-maniry voalohany izay hita eo an-tsisin-dàlana ao ambadiky ny dredge sy ny orinasa fanatanjahan-tena faharoa, ny fiara mifono rano ary ny sivana ao amoron-dranomasina. Voahangy avy any amin'ny hidina mankany amin'ny zavamaniry amoron-dranomasina ny aody amin'ny alàlan'ny fantsona tohanan'ny poneta.
Ny ahitra avy ao amin'ny dredges dia mamahana ny zavamaniry fototra ahodin-droa amin'ny maridrefy 2,200 mt / hr, miaraka amin'ny fandefasana ny làlan-tsoavaly voalohany mamakivaky ireo efijery roa sosona mankany amin'ny hodi-doko ary miaraka amin'ireo poti-javatra voajanahary simenitra 1 / 4-inch, toy ny akorandriaka, ary molaly be loatra avy amin'ny slurry. Ny efijery fanitarana dia nivezivezy tamin'ny fanesorana ny ampahany amin'ny tsimoka 150-mesh minus ary natao hampifantohana ny fihenan-tsasatra. Ny hetra dia mivoaka amin'ny goavam-be any amin'ny faritra fanariana, ary ny rano mihintsana ho an'ny fiara fitahirizam-bokatra, izay manome 1 / 2 hr surge.
Avy any anaty fiara fitobiana, ny foza dia mamindra ny slurry ho any amin'ny manasaraka herinaratra, izay nesorina ny solika 28-mesh dia nesorina ary nolaniany mba handaniany. Ny slurry dia nampivoarina tany amina bankin'ny rivodoza faharoa, izay nanala ireo sisa tavela amin'ny 150-mesh sisa tavela ary nohamainina ny tsiran'ny 65%. Ho fanomanana ny flotation, dia nidina tamin'ny dingana maromaro ny rivotry ny rivodoza. Ny menaka diesel no nampiasaina tamin'ny emulsion.
Ny slurry voarindra dia natsipy tamin'ny solifara 32-35% niaraka tamin'ny ranomasina ary nomena amina banky efatra misy sela flotation 500-ft3. Nentina raraka ny rambony, ary ny fifantohana voalohany kosa dia nivezivezy nankany amin'ny fiara mifono vy, izay namboarina tamin'ny asidra solifara mba hanapahana ireo reagents-drivotra. Avy eo ny paompy dia arotsaka amin'ny morontsiraka amin'ny tahan'ny 360 mt / hr.
Fantsona famindrana miaraka amina fiarabe reagent no nanatitra ireo mari-pamantarana flotation voalohany ary asidra solifara 95% ho any amin'ny sisin-dàlana mba hitazomana ny fizotrany.
Any amoron-tsiraka, fehezina indray ny slurry, mifangaro amin'ny rivodoza, ary voatobaka amin'ny kilasy hidraulika amin'ny fisarahana ny 28 / miampy tsiranoka 48 mesh. Ny sombin-tariby miaraka amin'ny 48 dia mihena ary mifoka amin'ny latabatra fangatahana mba hanesorana ny solika calculat. Ny ampahany kely 48 sombin-kofehy dia mihetsika amin'ny famoahana krizy zaridaina hafa amin'ny 100 mesh. Ny ampahany kely an'ny 100 mesh dia ahitam-bokatra amin'ny alàlan'ny rivodoza mankany amin'ny morontsiraka Humphrey, izay manaisotra ny ilmenite, zircon ary magnetite. Ireo mineraly mavesatra ireo dia voatondraka ao anaty dobo fitahirizana misaraka. Ny fifantohan'ny phosphate vokarina eo amin'ireo latabatra vovoka ary mitambatra ny boribory miaraka amin'ny singa 100 / minus 48 mesh ny hamoahana ny sakafo ho an'ny flotation faharoa.
Ny poavatra dia voasaina miaraka amin'ny diamine, asidra asidra ary menaka 5% any anaty ranomasina raha hanomana azy amin'ny flotation sekely tsy misy dikany, izay mamokatra vokatra simika mifangaro silika sy tafo fosfat ho vokatra. Ny slurry phosphate dia nohamafisina tamin'ny famoahana ny 60% amin'ny alàlan'ny rivodoza, nosasana amin'ny rano mangatsiaka, cycloned indray ary sivana. Ny filtera dia nasiana fantsom-bolo fanasana.
Ny mpandrindra fehikibo dia mandroso amin'ny mofomamy sivana mankany amin'ny trano fitahirizana mifangaro. Raha ilaina, ny bulldozer dia hanodinkodina ny fitaovana voatahiry hamokatra fanamasinana fanampiny.
Ny fambolena rano amin'ny toeram-pambolena amoron-tsiraka dia hanadio ny rano mihintsana hamokarana rano madio hanasana sy hanomezana ny boiler ampiasaina hanomanana diamore reagent. Ny famaritana rano madio dia mametra ny atiny amin'ny klôro ambony indrindra amin'ny 350 ppm.
Ny fizotran'ny fosfatsa izay ampiasaina any Santo Domingo dia mamokatra renirano maro, izay napetraka ao anaty faritra minitra-minitra na ao ambadiky ny dikes naorina ao anaty fasika. Any amoron-tsiraka, ny tany voajanahary dia avelao ho toy ny berm iray mitohy mba hitoka-monina ny faritra ala maina amin'ny rano eo amoron'ny rano. Raikitra ny rano fako. Ahitana ny 300 mt / hr amin'ny rano mitsingevana alohan'ny sela ny flotation; rambony mitotaly voalohany misy 1,340 mt / hr amin'ny slurry ao amin'ny 30% sol; fako silika mifangaro amin'ny flotation sekely sy manasa rano, misy tsiranoka 3,000 mt / hr amin'ny slurry ao amin'ny 5% solids; ary ny mineraly mavesatra mifantoka amin'ny kirihitra Humphrey, manodidina ny 72 / mt hr amin'ny slurry amin'ny kapila 25%.
Ireo konsentrates novokarina tao amin'ny Santo Domingo dia ampidirina 100 km mankany amin'ny serivisy fandefasana entana any Punta Belcher ao amin'ny nosy Magdalena amin'ny alàlan'ny tsipika mitongilana. Tao amin'ny trano fitahirizana Punta Belcher dia namboarina ho an'ny 100,000 mt mifantoka. Ny foibe dia mitantana ireo sambo hatramin'ny 40,000 DWT, ary ny rafitra faran'ny paroasy dia manana fahafaha-3,000 mt / hr.
Navoaka indray avy amin'ny Engineering & Mining Journal